Maareeyaha Dekedaha Somaliland oo Aqoon-korodhsi u Sameeyey Quusayaasha Badda...
Friday January 08, 2021 - 20:27:12 in Wararka by Super Admin
Berbera(Xogreebnews)- Haayada Dekedaha Somaliland, ayaa aqoon korodhsi dhinaca quusitaanka Biyaha Badda ah, siisay hawl-wadeenada Badda ee Dekeda Berbera.
Quusayaasha ayaa hadda dhamaystay aqoon korodhsiga quusitaanka.
Hawladeenada Dekeda Berbera, ayaa sannooyinkii u dambeeyey si weyn kor loogu qaaday heerarka aqooneed ee Shaqaalaha waaxyaha kala duwan ee Dekeda, waxana hore loogu Tabobar baray Shaqaalaha Dekeda ee Badda qaabka loo soo xidho Maraakiibta waaweyn ee Mother-shipka. Sidoo kale waxa si weyn kor loogu qaaday Shaqaalaha gaadiidka Badda ee Somaliland.
Shaqaalaha Dekedaha iyo Maamulkooda ayaa si weyn ugu hawlan u diyaar-garowga shaqada Dekeda cusub iyo sidoo kale Dekeda Berbera ee shaqaysaba. Hawladeena Quusayaasha hada ah kuwo u diyaarsan wax kastoo laga soo qabanayo Badda hoosteeda.